Termly: Mfe Jikwaa Nnabata Maka saịtị na ngwa gị | Martech Zone
Termly: Mfe Jikwaa Nkwado Maka saịtị na ngwa gị
Satọde, Febụwarị 1, 2020 Satọde, Febụwarị 1, 2020 Douglas Karr
Na onodu-larịị data nzuzo na nnabata ịmalite na Iwu Nchedo Ndị Ahịa California, ọdịnihu nke ịda mba na nkwado mba ụwa na-abụzi usoro ịkwa emo na-atọ ọchị. Emehiela m, anaghị m emegide iwu mgbe ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-akwa ma na-emegbu data ndị ahịa.
Tụ anya obere azụmaahịa zuru ụwa ọnụ iji debe abụghị 'ọ na-eri oge ma dị oke ọnụ, ọ nwere ike ibibi azụmahịa. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị amalite ịgbada n'okporo ụzọ nke steeti ọ bụla nwere ụkpụrụ nke ya. Nke a bụ otu n'ime ọnọdụ ndị chọrọ nkwekọrịta, ụkpụrụ mba ụwa maka nzuzo na ojiji data.
Termly bụ ọrụ iji nyere ndị ụlọ ọrụ aka idobe ngwa ha yana weebụsaịtị ha na-ekwenye na iwu niile azụmaahịa kwesịrị ịgbaso.
Chụ azụmaahịa chọrọ ka ị rube isi n'ọtụtụ iwu, iwu, na ntuziaka ndị na-eweta ọrụ. Ọ bụ nsogbu na ihe egwu na ịnwa ịgbaso iwu niile a n'onwe gị. Ikwu okwu nke ọma pụrụ inye aka belata ibu arọ nke irube isi n'iwu ma nye gị udo nke uche.
Ọrụ a jikọtara ma ikpo okwu ntinye maka idobe usoro gị na nkwupụta nzuzo gị yana ndụmọdụ iwu iji hụ na azụmaahịa gị kwadoro. Ọgwụgwụ na-agụnye:
All-na-Otu Kuki Kwere Ngwọta
Onye Kuki - Onye na-enyocha kuki na-akwụghị ụgwọ na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ gị maka kuki ma na-enyere gị aka ịkọwa ha maka GDPR na Iwu Kuki na-agbaso na nkeji.
Usoro Cookie Generator - Ozugbo a na-ahazi kuki gị, Termly ga-emepụta amụma kuki na akpaghị aka nke azụmahịa gị.
GDPR Kuki Banyere - Na-anakọta nkwenye ndị ọrụ ngwa ngwa ma na-agbaso GDPR na ePrivacy Directive na ọkọlọtọ nkwenye kuki nke Termly nwere ike ịhazi.
Nweta iwu kuki gị
Usoro na Ọnọdụ Generator
Emere maka azụmahịa gị - Nweta usoro na ọnọdụ emere maka blọgụ gị, weebụsaịtị, ngwa, SaaS ma ọ bụ saịtị ecommerce. Mepụta ntuziaka na ikike maka ikpo okwu gị.
customizable - Etinyekwala maka usoro na ọnọdụ dị iche iche mgbe ị nwere ike hazie ọdịdị na mmetụta nke usoro gị iji dabaa ụdị pụrụ iche nke weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa gị.
Nbudata Weebụ efu - Termly ga-anabata ọnọdụ gị na ọnọdụ gị n'efu! Naanị tinye njikọ na saịtị gị iji mee ka usoro ọrụ na ọnọdụ gị dị maka ndị ọrụ.
N'ịwa gị Online Usoro na ọnọdụ
Generator Nzuzo nzuzo
Ọtụtụ nyiwe - Ma ị na-agba blọọgụ, saịtị ecommerce, ngwa iPhone, ngwa gam akporo, ma ọ bụ ngwa Facebook, jenerato iwu nzuzo nke Termly kpuchitere azụmahịa gị.
GDPR-Dabara - Mepụta iwu nzuzo iji mezuo ntuziaka nke GDPR, yana Google Play, Analytics, Adsense, Storelọ Ahịa App, na ndị ọzọ!
Akpaka-mmelite - Mgbe obula iwu ohuru na-aputa, ndi otu ndi oka iwu ga-emezi iwu nzuzo gi na-akpaghị aka, na-eme ka o doo anya.
Igbanye Nzuzo Gị
Akwụkwọ ikike Generator
Emere maka azụmahịa gị - Ihe obula iwu nkwuputa ichoro - site na nkwuputa ogwu ma obu ndi ozo rue ihe ngosiputa nke mbu - Termly's free generator ka ekpuchigoro gi.
customizable - Jiri Termly's suite nke ịke iji hazie nkwuputa gị ka ọ dabaa na ụdị azụmahịa gị, blog, ma ọ bụ ngwa gị, yabụ na akara aha gị na-adịkarị.
Dị Mfe Tinye - Zere ibu iwu na mkpesa nke iwu site na ime ka iwu ngosi gị dị mfe ịnweta. Naanị mado njikọ ahụ iji gbakwunye peeji nke disclaimer gị na saịtị gị.
N'ịkọwapụta Nkwupụta Iwu Gị
Nkwụghachi ụgwọ na nkwụghachi ụgwọ Generator
Emere maka azụmahịa gị - Termly nloghachi iwu generator na-akwalite iwu ọ bụla kpọmkwem na ikpo okwu gị, n'agbanyeghị nha, ụdị, ma ọ bụ ọnọdụ azụmahịa ị na-arụ.
customizable - Achụkwala akara ụlọ ahịa gị - Termly's suite nke nhọrọ ịhazi gị na-enye gị ohere ijikọ ụdị anya nkwụghachi ụgwọ gị na azụmaahịa gị.
Dị Mfe Tinye - Inye ndị ahịa iwu zuru oke banyere mbupu gị, mgbanwe gị, nloghachi gị, na nkwụghachi gị dị nfe dị ka ịfe njikọ na saịtị gị.
Mee usoro nkwụghachi na nkwụghachi gị
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Ọgwụgwụ